Sida loo hagaagsan iCloud xiriir la Google
Sida loo hagaagsan iCloud Xiriirada la Google
Technology ayaa wax walba oo ku haboon iyo meel uu ka gaaro Dadka. Telefonada casriga ah ayaa ka mid been abuurtay weyn sida in ay nolosheena bedelay. Your casriga ah waa mid aad u anfacaya, la qaadi karo oo si fudud loo meel kasta iyo meel kasta isticmaasho. Marka ay timaado in syncing xogta iPhone aad ka mid ah qoraalada, xiriirada, fariimo iyo wax kasta oo kale, syncing ma joogo sida syncing dhaqameedka meesha aad doonta inay bixiso waqti badan, haddana uu yahay mid aad u fudud oo isticmaalaya iCloud, Lugood, iyo kii saddexaad cajiib ah software xisbiga sida Wondershare MobileTrans. Bal aan eegno sawirka dhamaystiran oo la isticmaalayo iCloud iyo Wondershare MobileTrans si hagaagsan xiriirada iPhone aad. Koombiyuutarka xiriirada on iCloud waa mid fudud oo ka kaaftoomi-free, aynu fahmi talaabada ay talaabo ah syncing xiriirada iCloud la Google gacanta.
Qaybta 1. syncing iCloud xiriir la Google gacanta
Marka hore booqasho www.icloud.com si ay u helaan oo soo bixi aad iCloud Xiriirada. Si aad u gasho in aad xisaabta iCloud, waxaad u baahan tahay in aad isticmaashid ID Apple gaar ah iyo password. Marka aad qortey idinka aawadiin Apple, guji "Xiriirada" ka dibna gal Google Xiriirada iyo soo dejinta Xiriirada ka iCloud.
Marka aad keeno xiriirada iCloud aad, waxaa la gaadhay wakhtigii si ay u dhoofiyaan. Waayo, guji "Settings" icon ku taalla bidix hoose ee shaashadda weyn. Ka dib markii gujinaya "Settings," guji "Dhoofinta VCard" sida ku cad image ka. La soco ah u socoto, halkaas oo uu idiin badbaadiyo faylasha.
Talaabada 3: Import Xiriirada in Google ka iCloud
Hadda, waxaad u baahan tahay inaad u tagto aad google xiriir bogga. Si aad u booqato riix halkan www.google.com/contacts. Bogga, gasho la ID Google aad. Marka aad soo gashid xisaabtaada, guji "More" ka dibna riix "Import" ikhtiyaarka u muuqata shaashadda. Waxaad ayaa lagala soo bixi file VCard tallaabadii u dambaysay. Dooro file VCard rogtid oo aad kombuutarka.
Hubi in aad xisaabta Google loo ogol yahay inuu u hagaagsan xiriirada qalabka Android.
Qaybta 2.Sync iCloud xiriir la Wondershare MobileTrans
Daal isticmaalka syncing Buuggan oo raadinaya hab ka kaaftoomi la'aan ah u hagaagsan xiriirada aad ah? Wondershare MobileTrans waa fursad fiican oo aad u. Waxaa la shaqeeyaa xawaaraha cajiib ah oo uu fududeeyaa wareejinta xogta ka iPhone xisaab Android aad u hagaagsan iyo xogta aad la Google.
Wondershare MobileTrans Sidoo kale kuu ogolaanaya inaad si hagaagsan fariimaha, abuse wac, sawiro, barnaamijyadooda, music, jadwalka iyo in ka badan. Qaar ka mid ah qaababka ay sare oo kale oo ka mid ah:
• Waxaa retrieves gurmad telefoonka aad.
• Waxaa retrieves xogta laga gurmad wax iCloud.
• Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dib ilaa xogta aad iyo u soo celiso qalabka kale mar kasta oo aad rabto in aad.
• ilaaliyaa xogta amaan iyo kalsooni ah ee aad taleefan.
• Taageerada dheeraad ah ka badan 300 oo telefoonada iyo shabakadaha.
4.988.912 oo qof ayaa u soo bixi
Tallaabada 1. Isku aad telefoon iyo geli account iCloud ah
Marka hore, waxay dooran icon iCloud ku homescreen ee Wondershare mobileTrans. Markaas xirmaan telefoonka aad Android inay kombiyuutarka. Marka aad qalabka lagu ogaado by barnaamijka, eegno on your screen PC. Waxaad ku qortaa account iCloud oo galaan.
Tallaabada 2. Kala beddelashada xiriirada iCloud in Android:
Hadda dooran file gurmad ay ku jiraan xiriirrada in aad rabto in aad u hagaagsan in Google oo halkan download it ah. Markaas dooro "Xiriirada" oo si fudud u riix "Start Copy" button shaashadda ugu weyn.
Tallaabada 3. syncing Your Device Android la Google
Si aad u hagaagsan qalab Android aad la Google, garaac icon Settings shaashadda iyo galaya goobaha menu, garaac Accounts ah tab ay galaan Accounts ah. Hadda, garaac icon Google. Waxa ay keenaysaa in aad xisaabta Google. Dooro waxyaabaha aad rabto in aad u hagaagsan la xisaabtaada Google. Hagaagsan wax walba BT si fudud looga faa'idaysan on the "nidaameed oo dhan" button. Si aad u hagaagsan alaabta gaarka ah, geli menu soo socda dooro. Waxaa jira Xiriirada nidaameed tab, calaamadee sanduuqa ku xiga si Xiriirada nidaameed ee tab iyo garaac nidaameed hadda si hagaagsan aad xiriirka la leedahay.
Syncing aad la xiriirayso account iCloud waa heer sare faa'iido sababta oo ah waxa aad heli kartaa xiriirada aad si fudud ku computer desktop wax fudud by internet adreska ah in aad xisaabta iCloud. Tageen yihiin maalmaha, marka aad ayaa looga baahan yahay in ay sameyso buug aad naftaada waqtiga oo dhan. Waxaad ma seegi faahfaahin daqiiqadii kasta sababtoo ah waxaad leedahay iPhone xaq ag aad si sahal aad mar walba oo aad u baahan tahay. Iyadoo qodobkan, hadda aad u ogaato sida aad u hagaagsan karo xiriirada iPhone aad la iCloud iyo isticmaalka Wondershare MobileTrans u Mac . Ku raaxayso waayo-aragnimo aan xuduud lahayn oo la Wondershare MobileTrans halkaas oo inta badan markii aad waa la badbaadiyey oo aadan aakhirka laga badiyay mid ka mid ah xogta aad.
Sidee si ay u helaan iCloud File kaabta iyo sida aad u aragtid waxa ay ku iCloud
Sida loo Delete Photos ka iCloud
Ka dhig gacmaha Jebiyayaasha 'Off Your iCloud
4 Siyaabaha la isu caawino in aad takhaluso soo noq iCloud Saxiixa-Codsiga
> Resource > iCloud > Sida loo hagaagsan iCloud xiriir la Google